Guuxa Caasimadda: Dagaal ayaa loo bira-tuntay | KEYDMEDIA ONLINE
Guuxa Caasimadda: Dagaal ayaa loo bira-tuntay
Fahad, wuxuu abaabul xooggan ka dhex wadaa ciidanka XDS, gaar ahaan Gorgor, halka booliska gaarka ah ee Haramcad iyo Ururrada kale, ee Waran iyo Duufaan oo NISA hoos taga uu kordhiyay tiradooda bishii la soo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dib-u-dhaca doorashada oo lagu daray boobka iyo bililiqada kuraasta Golaha Shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxa ay horseedday xiisad siyaasadeed xilli kasta xasarad iyo gacan ka hadal isku rogi karta.
Mucaaradku, waxa ay ku dhawaaqeen in aysan qeb ka ahayn hannaanka boobka ah ee hadda wax ku socdaan, waxa ay iclaamiyeen shir looga tashanayo aayaha dalka, si looga samata-baxo buuqa ka dhashay idlaanshaha muddo sharciyeedkii hay’adaha Dowladda.
Guuxa siyaasadeed ee Caasimadda ka jira, wuxuu horseeday in daneeyayaasha siyaasadda iyo inta badan xubnaha mucaaradka ay ku aruuraan degmada Wadajir iyo Huteel Jasiira, halkaas oo la rumeysan yahay in ay ugu amni roontahay magaalada.
Sida ay Keydmeida Online, hore u baahisay, waxaa socda abaabul xooggan oo dib loogu soo celinayo Ciidankii Badabaado Qaran ee dhamaadkii April, ka hor tagay muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee Farmaajo samaeystay.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa sugaya in maalmaha soo socda ay soo gaaraan 25 duulimaad oo mid kasta uu sido 200 oo ka mid ah dhallinyaradii qaarkood saddex sano ka hor loo qaaday Eritrea, waa 5000 [Shan kun] oo askari.
Sidoo kale, Fahad, wuxuu abaabul xooggan ka dhex wadaa ciidanka XDS, gaar ahaan Gorgor, halka booliska gaarka ah ee Haramcad iyo Ururrada kale, ee Waran iyo Duufaan oo NISA hoos taga uu kordhiyay tiradooda bishii la soo dhaafay.
Farmaajo, wuxuu garab ka helayaa Dowladaha Qatar, Eritrea Ethiopia iyo Turkey, oo ay u sii dheer yihiin Shiinaha iyo Ruushka, wuxuuna isku diyaarinayaa inuu xoog ciidan ku sii joogo kursiga ugu sarreeya dalka.
Musharixiinta, ayaa la filayaa in ay dhawaan dhisaan Gole Qaran, oo leh Guddi Amni iyo ciidan gaar ah, kaas oo dalka ka qabta doorasho la isla oggolyahay, waana qorshe uu Farmaajo doonayo in uusan hirgalin, isla-markaasna uu u daadinayo, dhiigga reer Muqdisho.
Guuxa ciidan gurashada ee ka jira Muqdisho, wuxuu u muuqdaa, in mar kale, foodda la is dari doono, ka hor dhamaadka sanadka cusub, waxaana la filayaa in markaan haddii Muqdisho marti galiso dagaal kale, uu si weyn kaga gadisnaan doono midkii April ee maalmaha yar socday.